thinzar's blog: February 2009
Taman Pertanian ထဲက ကြက်တူရွေးလေး။ သူ့ပုံက လူကို ပြုံးပြနေသလိုဘဲ။
လိပ်ပြာ နဲ့ leaf frog (သစ်ရွက်နဲ့တူတဲ့ဖား)
ငါးကလေးတွေ တန်းစီ (ငါးစာကျွေးတုန်း ရိုက်ထားတာ)
KLCC Acquaria ထဲက။ ဘာခေါ်လဲ မေ့နေတယ်။ ငါးလိပ်ကျောက် မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ မျက်နှာပုံစံက ရုပ်ဆိုးဆိုး လူတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်နော်။ :)
ယုန်မြင်ရင် ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာ ယုန်ကလေးတွေ မွေးဖူးတာကို သွားသတိရတယ်။ ယုန်က တစ်ခါ သားပေါက်ရင် ခြောက်ကောင် အနည်းဆုံးဘဲ။ ဒါပေမယ့် မွေးလာပြီးရင် ကလေးတွေကို မစောင့်ရှောက်တတ်ဘူး။ အမှန်က စောင့်ရှောက်ရကောင်းမှန်းမသိတာလား ဘာလားဘဲ။ ယုန်အမေကြီး နင်းပစ်မိမှာစိုးလို့ ယုန်သားပေါက်လေးတွေကို သပ်သပ်ခွဲထားရတယ်။ တောင်ကြီးမှာ အေးတော့ နွေးအောင်ဆိုပြီး မီးသီးလေးတစ်လုံး ထွန်းထားပေးရတယ်။ နို့တိုက်တဲ့အခါ ယုန်အမေကြီးရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို တစ်ယောက်ကဆွဲ၊ နောက်၂ချောင်းကို နောက်တစ်ယောက်ကဆွဲ၊ မျက်စိမပွင့်သေးတဲ့ သားပေါက်လေးတွေကို တစ်ယောက်က ရွှေ့နဲ့ ပျော်ဖို့တော့ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုန်ကလေးတွေ ခဏခဏ အခိုးခံရတယ်။ အရက်သမားတွေ အရက်နဲ့မြည်းဖို့ထင်တယ်။ ညဆိုရင် သူတို့ မျက်လုံးလေတွေဟာ မီးသီးလိုဘဲ နီရဲလက်နေတာဘဲ။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ တစ်ခုဘဲ မကောင်းတာ။ ယုန်ချီးက အရမ်းနံတယ်။ ယုန်အိမ်ကို တံခါးဝနားမှာထားတော့ ဧည့်သည်လာရင် အားနာဖို့တော့ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းလို့ မနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ညပိုင်းတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ညမွှေးပန်းပင်စိုက်ထားလို့ တော်သေးတယ်။ မနက်မနက် အမေ တောင်ကြီးဈေးထဲသွားရင် ဂေါ်ဖီထုပ်အနွမ်းတွေ ဆာလာအိတ်နဲ့ တစ်အိတ်အပြည့် နှစ်ရက်တစ်ခါ ဝယ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ယုန်တွေ များလာပြီး မနိုင်တော့တာနဲ့ အဖေက အကုန်လုံးကို ဆရာတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ အိမ်မှာ ခြောက်လလောက်ဘဲ ကြာလိုက်တယ်ထင်တယ်။
အမှန်က ပုံတွေဘဲ တင်မလို့။ ယုန်မြင်လို့ သတိရသွားတာနဲ့ စာနည်းနည်း ရှည်သွားတယ်။ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံအဟောင်းထဲကရှာပြီး တင်လိုက်တာ ကုန်းလေရေနေ သတ္တဝါ စုံသွားတာဘဲ။
တနင်္ဂနွေနေ့က Pavilion မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Geng: Adventure Begins သွားကြည့်တယ်။ မလေးရှားကထုတ်တဲ့ ပထမဆုံး CGI animation movie ဆိုတော့ သွားအားပေးတာပေါ့။ ပရိသတ်ကတော့ ရုံအပြည့်ဘဲ။ KLCC မှာ တစ်နေကုန်စာ လက်မှတ်ဘွတ်ကင်တွေ ပြည့်သွားလို့ Pavilion အထိ ကြိုးစားပမ်းစား သွားကြည့်တာ။ animation ရုပ်ရှင်တစ်ကားအနေနဲ့ ကြည့်ရင် အရုပ်/အသံ ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိဘူး။ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ထုတ်တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ကမာ္ဘ့အဆင့်မီအောင် တော်တော်ကြိုးစားထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီကာတွန်း ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်ဖို့ သူတို့တွေ ဝန်ထမ်းအယောက် ၄ဝ နဲ့ ၂နှစ် ကြာအောင် အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း အတွေ့အကြုံ အရမ်းရှိတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘဲ လောလောလတ်လတ် Multimedia major နဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့သူတွေ များတယ်။ အစပိုင်းမှာ အပိုဝင်ငွေရအောင် TV9 အတွက် ၅မိနစ်စာ ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေ အပိုင်း ၁၈ပိုင်း ရိုက်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေ မှာ Upin နဲ့ Ipin ဆိုတဲ့ ချစ်စရာ အမြွာကလေး နှစ်ယောက်ဟာ မလေးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လူကြီးလူငယ်မရွေး အားပေးမှုကို ရခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေကနေ သူတို့ကုမ္ပဏီဟာ တော်တော်ကို နာမည်ရသွားခဲ့တယ်။ အားလုံးက ဒီရုပ်ရှင်ထွက်လာမယ့်အချိန်ကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ Feb 12ရက်နေ့က စပြတာ အခုထိ တစ်ပါတ်အတွင်းမှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်စာရင်းမှာ နံပါတ်တစ်ဖြစ်နေတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမအတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းက မျှော်လင့်ထားသလောက် မကောင်းဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အစပိုင်းမိနစ် ၃ဝ လောက်အထိကတော့ အရမ်းကို ကောင်းတယ်။ ခွေထွက်ရင် Original ခွေ ဝယ်လိုက်မယ်လို့တောင် ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ အလယ်ပိုင်းလောက်ရောက်တော့ နည်းနည်း ချာသွားတယ်။ မဖြစ်နိုင်တာကြီးတွေ ထည့်ရိုက်ထားတော့ အရမ်းကို ကလေးကလား ဆန်သွားတယ်။ အခုတော့ ညဈေးကနေ ၅ကျပ်နဲ့ ခိုးကူးခွေဘဲ ဝယ်မလားလို့ စဉ်းစားထားတယ်။
KL မြို့ပြမှာနေတဲ့ Badrol ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း Lim တို့ဟာ Badrol ရဲ့ အဖိုးပိုင်တဲ့ Kampung Durian (ဒူးရင်းသီးရွာ) ကို ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အလည်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အရမ်းကို အဆော့မက်တဲ့ Upin နဲ့ Ipin အမြွာနှစ်ယောက်ရယ်၊ တိရိစာ္ဆန်တွေရဲ့ စကားကို နားလည်တဲ့ Rajoo ဆိုတဲ့ Indian လေး တစ်ယောက်ရယ် နေတဲ့ရွာပေါ့။ အဲဒီရွာမှာ ဒူးရင်းသီး တစ္ဆေ သောင်းကျန်းနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့အချိန်၊ ရွာထဲက ဒူးရင်းသီးတွေ ပျောက်ပျောက်နေတာ တစ္ဆေ လက်ချက်လို့ ရွာသားတွေက ယုံကြည်ထားကြတယ်။ တစ်နေ့ Badrol, Lim, Upin, Ipin, Kak Ros, Rajoo တို့ဟာ ဒူးရင်းသီးခြံကို သွားလည်ရင်း အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ သတ္တဝါလေး တစ်ကောင်ကို တွေ့တယ်။ သူတို့တွေဟာ အဲဒီ အကောင်လေးနောက်ကို လိုက်ရင်း တောထဲမှာ လမ်းပျောက်သွားပြီး ဒူးရင်းသီး တစ္ဆေနဲ့ တွေ့တဲ့ပုံလေးကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ အစပိုင်းမှာ ရွာထဲက ရွာသားတွေရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်အောင် ရိုက်ပြထားတာကို အရမ်းကြိုက်မိတယ်။ မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့ အမြွာနှစ်ကောင်၊ အတင်းပြောကြတဲ့ လူတွေရဲ့ဓလေ့၊ မလေး၊တရုတ်၊အင်ဒီယန်း စတဲ့ မတူညီတဲ့ လူမျိုးစု သုံးစု စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေတဲ့ ရွာလေးရဲ့အကြောင်းကို အဓိကထားပြီး ပြသွားတယ်။ တရုတ်သံဝဲဝဲလေးနဲ့ ပြောသွားတဲ့ မလေးစကားရယ်၊ ကုလားသံ ဝဲဝဲနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့ မလေးစကားရယ်က အရမ်းကို နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စရိုက်လေးပါဘဲ။
တောထဲသွားရင်း ဂူထဲမှာ မြွေကြီးနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့အခန်းမပါဘဲ သူတို့ ရွာဓလေ့ပေါ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ အခန်းများများပါရင် ဒီထက်ပိုကောင်းမှာ အမှန်ဘဲ။ အဲဒီ မြွေကြီးက သူတို့နောက် လိုက်နေတာနဲ့တင် မိနစ် ၃ဝ လောက် ကြာသွားတယ်။ ရုံမှာ သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် စာတန်းတွေ ဘာတွေ အားလုံး ထိုးပြီးတဲ့ အထိ ထိုင်ကြည့်ပါ။ တစ်ချို့က ရုပ်ရှင်ရုံက ဝန်ထမ်းတွေ တံခါးစဖွင့်တာနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သလိုဘဲ ပထမရအောင် ထထွက်သွားကြတယ်။ [ဟို ဘလော့ဂါတစ်ယောက် စာတန်းထိုးတာနဲ့ ထပြေးလို့ ရုပ်ရှင်တစ်ဝက်ဘဲ ကြည့်လိုက်ရတာကို မဆီမဆိုင် သတိရမိသေးတယ်။ :D] အမှန်က စာတန်းထိုးပြီး တစ်ဝက်လောက်မှာ Bonus အပိုင်း တစ်ခုပါသေးတယ်။ အမြွာနှစ်ကောင်က သူတို့အဖွားတို့တစ်တွေ ဒီတောထဲကို ဘယ်လိုရောက်လာကြသလဲဆိုတာ ကလေးအတွေးလေးနဲ့ တွေးလိုက်တဲ့ အခန်းလေးပေါ့။ တော်တော်ရီရတယ်။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ အရောင်တွေ ဘာတွေ လုပ်ထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ခွေနဲ့ကြည့်တာထက်စာရင် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်ရတော့ သူ့ရဲ့ sound effect တွေလည်း တော်တော်ကို ကောင်းတာ သတိထားမိတယ်။ Final Editing တစ်ခုဘဲ ဘန်ကောက်မှာ သွားလုပ်ပြီး ကျန်တာအားလုံး မလေးရှားမှာထုတ်တာဆိုတော့ သူတို့လူမျိုးတွေအတွက် တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာဘဲပေါ့။
The long awaited animation Geng: Adventure Begins finally arrives to cinemas. I went to watched it at GSC Pavilion last Sunday. Overall, I would rate the movie 8.0/10. Initially, I’ve already given it 10/10 but somewhere in the middle of the film, the scenes whereagiant snake chased the geng were totally unrealistic and skewed the storyalittle bit, I think.
I really love the way they incorporate the Malay, Chinese and Indian cultures into the film. The background color, lighting and the sound effects left me in awe. I was justalittle unsatisfied because my favorite Upin & Ipin appeared inafew scenes only. I am sure many fans will feel discontent about not seeing Upin & Ipin as the main lead as well. By the way, I felt that Upin & Ipin's skin got darker compare to when they first come out in season1. Don't you think so? However, I’m really impressed with what Malaysians can achieve for their first ever 3D film. They haveagreat potential to achieve more in the future.
Others: Upin & Ipin's Youtube Channel
Credits: Images taken from Les' Copaque Production Website, Official movie webiste, and their official blog.
ဒီတစ်ပါတ် မလေးရှားအဲလိုင်းက လေယာဉ်လက်မှတ် ပရိုမိုးရှင်းရှိတယ်။
Booking Period: 10-19 February 2009
Travel Period: 17 Feb 2009 - 30 Sept 2009
အတိအကျသိချင်ရင် မလေးရှားအဲလိုင်း website မှာ သွားဖတ်ပါ။
ရန်ကုန်ကို အသွားအပြန်မှ ရင်းဂစ် ၇၈ဝ လောက်ဘဲကျတယ်။တော်တော်ကို တန်တယ်။ မြန်မာပြည်ကို တစ်ရက် flight နှစ်ခုတောင် ဆွဲပေးပြီဘဲ။ ဈေးချတဲ့အချိန်ကလည်း ကိုးလို့ကန့်လန့်။ ကျောင်းတက်တုန်းကလိုဆို ကျောင်းပိတ်ရက်ကို ချိန်ပြီး ကြိုဝယ်ထားလို့ ရတယ်။ အခု အလုပ်လုပ်နေတော့ ဘယ်လဘယ်ရက်မှာ အားမယ်ဆိုတာ ကြိုပြီး မမြင်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အရင်တစ်ခေါက် ခွင့်တစ်လ ယူထားတာလည်း မကြာသေးဘူးဆိုတော့ ငါ့ကို ဘယ်အချိန် ခွင့်ပေးမလဲ သွားမေးရင် အရိုက်ခံရမလား မသိဘူး။ Sydney ကို အသွားအပြန် RM ၁၆၂၉ တဲ့။
The Net 2.0 ကြည့်ဖူးကြလား။ ထွက်တာ နည်းနည်းတော့ ကြာနေပြီ။ ၂၀၀၆ လောက်က။ တူရကီမှာ ရိုက်ထားတဲ့ကားလေ။ movie review ရေးမလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကားထဲမှာ system analyst တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးက သူ့ရဲ့ ID တွေ အကုန် အခိုးခံလိုက်ရပြီး လူမသိ သူမသိ ဘဝကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘဝအမှန် ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားတာကို မှတ်မိမှာပေါ့။ ဘဏ်မန်နေဂျာရဲ့ အီးမေးလ် အကောင့်ကို သုံးပြီး ဘဏ်ကို အီးမေးလ်ပို့ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ သိသလိုလိုနဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖူးတဲ့ ပုံလိုမျိုး photoshop လုပ်လိုက်တယ်။ ဘဏ်ကို သွားတဲ့အချိန်မှာ ဝန်ထမ်းတွေက ယုံကြည်သွားတယ်လေ။ အဲဒီလိုမျိုး ရုပ်ရှင်ထဲမှာဘဲ ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာဆိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်လို့ မရဘူး ထင်ထားတာ။ အခု application တစ်ခု စမ်းရေးကြည့်ရင်းနဲ့မှ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ သိသွားတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မရည်ရွယ်ဘဲ လုပ်ကြည့်ရင် လက်ခံမလားဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ အန္တရာယ်များလှတဲ့ အီးမေးလ် server တွေအကြောင်း သိလာတယ်။
The Net 2.0 ထဲကလိုမျိုး ဘဏ်မန်နေဂျာအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို အီးမေးလ်ပို့ချင်ရင် အဲဒီ ဘဏ်မန်နေဂျာရဲ့ password တွေ ဘာတွေ အပင်ပန်းခံပြီး hack နေဖို့ မလိုဘူး။ သူတို့သုံးတဲ့ email server ရယ် port ရယ် သိရင် ရပြီ။ အကယ်လို့ သင့်ဆီကို အောက်ကလိုမျိုး အီးမေးလ် တစ်စောင် ဝင်လာတယ် ဆိုပါစို့။ အခုခေတ်မှာ spam တွေ အရမ်းများတဲ့အတွက် တော်ရုံအီးမေးလ်ဆိုရင် သံသယ ဝင်ကောင်းဝင်နိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် အီးမေးလ် လိပ်စာကို ကြည့်ပြီး admin@microsoft.com ဆိုတာနဲ့ သံသယတွေ ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ်။
အမှန် ဒီ email က ဘယ် Microsoft ကမှ ပို့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာပေးဖို့ From: အတွက် ထည့်ချင်တာ တစ်ခုထည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပို့ထားတာ။ double click နှစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီလို email မျိုးပို့လို့ရတယ်။ ကျမကတော့ ဥပမာဘဲပေးတာမို့ အကြောင်းအရာထဲမှာ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မရေးထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာတွေ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်တာနဲ့တင် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ရေးတာကလည်း ဒါကိုသိပြီး သူများကို လိုက်ပြီး မကောင်းကြံဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း technical details မရေးတော့ပါဘူး။ fake email ပို့ရတာ ဘယ်လောက် လွယ်သလဲဆိုတာကို သိထားနိုင်ဖို့ပါ။ ကိုယ့်ဆီကို ဝင်လာသမျှအီးမေးလ်တိုင်းကို မယုံဖို့ ဆင်ခြင်နိုင်စေချင်တယ်။ အခုခေတ်ကြီးမှာ သံသယကြီးကြီးနဲ့နေမှသာ တော်ကာကျတယ်။ နည်းပညာ တိုးတက်လာလေလေ လိမ်လည် လှည့်ဖြားမှုတွေကလည်း ပိုများလာမှာဘဲ။ ရှာဖတ်ကြည့်သလောက်တော့ ဒီထက်လွယ်တဲ့နည်းတွေ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ဒါတွေအားလုံးကို Email Spoofing လို့ခေါ်တယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်လို့ ရသလဲဆိုတာတော့ ကျမ စဥ်းစားလို့ မရသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ SMTP server တွေရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုလား???
1. မိမိဆီလာတဲ့ အီးမေးလ်ကို ဘယ်ကလာသလဲ ရှာကြည့်မယ်
2. Tracking E-mail